Uri nzvimbo yaunofanira kuenda here? Kubuda? Kana Kuti Chiratidzo Chete Here? | Martech Zone
Uri nzvimbo yaunofanira kuenda here? Kubuda? Kana Kuti Chiratidzo Chete Here?
Svondo, Gunyana 22, 2013 Svondo, Gunyana 22, 2013 Douglas Karr
Iko kufunga kweiyo online kushambadzira fanira kusiyaniswa nekambani kuenda kune imwe kambani. Isu tine vatengi vanogutsikana nekungova neyakafanira bhurocha saiti kuitira kuti vagone kutarisa yavo yekutengesa runyorwa kuti ivo vane yakanaka saiti. Maonero asingafadzi, asi vamwe vachiri kunetsekana nekunzwisisa kupindirana kwewebhu uye ivo vanoramba vachizendama pane kwavo kuyedzwa uye kwechokwadi chinyakare nzira dzekutengesa. Ndinoda kukanda fananidzo iyo yandave ndichifunga nezvayo kwenguva yakati - ichitidzosera kune iyo yeruzivo yepamusoro-soro fananidzo.
Yako online yekutengesa zano inogona kuve chiratidzo, ane mbudo kana rwendo kune tarisiro nevatengi. Zano rega rega rine zvarinoda uye mabhenefiti. Chikwangwani chinoda zviwanikwa zvishoma uye chinopa mhinduro shoma. Kubuda kunoda zvimwe. Iyo yekuenda yakanyanyisa. Ungaita sei kusarudza kuti zano rako nderei?
Kupa ruvara kumuenzaniso uyu, ngatiti ndiri kuenda kunotenga nekuisa Philips 55 - HDTV. Nekudaro, ini ndinoita tsvagiridzo nezve zvigadzirwa uye ruzivo kuti nditenge zvakanaka, uye kudzidza maitiro ekumisikidza uye nekuishandisa.
Philips Webhusaiti ndiwo chiratidzo. Pasina chero mutengo kana ruzivo rwekuti ungatenga kupi, zvipi zvishandiso zvekushandisa, kana mavhidhiyo ekuti ungashandisa sei chigadzirwa - ino webhusaiti ingori dhijitari bhurocha. Kunyange iri webhusaiti yakagadzirirwa zvakanaka, hapana kana chiitiko. Muchokwadi, vanhu vana chete ndivo vakaongorora chigadzirwa… nemamwe maongororo asina kunaka. Iyo peji chairo rakatyoka, zvakare… richiti kune 4 wongororo kana paine chaipo 0.
Pamusoro pehunyanzvi maratidziro aunowana paPhilips, Newegg inopa mukana wekutenga, tarisa zvigadzirwa zvakafanana, uye uone ongororo (kunyange hazvo pasina). Kana mutengo weNewegg, kutumira uye kudzoka mutemo kwakanaka - ndipo paunobuda. Kana zvisiri, unodzokera munzira uye unotsvaga imwe nzvimbo kuti uwane ruzivo kana kutenga.
Kutarisa kumwe kwekutsvaga mitsva uye iwe unogona kutaura kuti ndeipi kambani yakaisa zvimwe mukutsvaga kwavo injini yekugadzirisa. Kupinda kweCNET kune zvakapfuma zvimedu zvekutarisa uye mitengo, pamwe nekunyora kwakagoneswa:
Peji rekudzokorora rakadzika uye risinganzwisisike… ne CNET ongororo, mushandisi ongororo, mushandisi makomendi, kugona kutevedzera shanduko pane peji, vhidhiyo, madhairekisheni ekushandisa, kwakadzama kushamwaridzana kushamwaridzana (nekudyidzana kwakawanda), matani emifananidzo kusanganisira iyo menyu sisitimu, sarudzo dzinoverengeka dzekutenga, mitengo yemazuva ano, chirevo chekudzokorora, kuenzanisa nemamwe mabhii, technical specs (kuseri kwenzvimbo yePhilips!) Pamusoro peiyo ongororo yakadzama nemunyori anonzi ane pikicha uye biography .
Kunyange iwe usingakwanise kutenga paCNET, ino ndiyo nzvimbo yekuenda. Vanhu vanogona kusvetuka kubva kuno saiti kudzvanya bhatani rekutenga kuAmazon kana kumwe kunhu, asi ndipo pavakawana ruzivo rwavaida uye nekwavanodzoka nguva inotevera
Zvakanakisisa Kutenga: Iyo Inokundikana
Zvakanakisisa Kutenga hazvina basa kana iwe watenga chigadzirwa kana kwete… ivo vari chete mushure mitsva yekutengesa. Saka - kanganwa chokwadi chekuti ndine yakanakisa Buy Rewards kadhi uye kuti ini ndingangoda kutsvaga rumwe ruzivo nezvekutenga kwandakaita kuchitoro chako. Hapana muto wako.
Philips aigona kuvaka peji rinoshamisa - nemavhidhiyo, kurairirwa, zvishongedzo, uye ongororo dzinozvimirira nevatungamiriri veindasitiri. Kana ivo vanogona curate mamwe masayiti uye ongororo pane iro peji. Zvichida chinonyanya kufadza chisipo kugona kwekungoona mitengo uye tinya kuti utenge pazvitoro zvakatakura chigadzirwa.
Kana CNET ichigona kubatsira nekuvimba neshambadziro uye nemubatanidzwa mari, zvirokwazvo masosi ari pamusoro anogona kusimudzira mapeji awo kuti agone zvese maficha uye zvemukati zvakakosha kuti ive nzvimbo yekuenda.
Ungaita sei kuti uvakezve yako saiti kuti uve nechokwadi chekuti ndiyo nzvimbo yevashanyi vari kutsvaga kana kutenga mukutenga muindastiri yako? Ini ndinofunga makambani akawandisa anozvitarisa senzira yekubuda uye anotaridzika kuenderana kana kurova makwikwi avo nekuve a zviri nani kubuda. Nei usingave uri kuenda?